Iingoma eziPhambili zeNkqantozi zeeNgoma zama-1990
Umculo 90s Ifuna
Ukuqhawula kunye ne-Boss, Bikini Ukubulala kunye nokunye
Xa kuthelekiswa nehlabathi lethu le-post / 9/11 okanye ukuqhuma kwee-1960s, ixesha elithile libonakala liphazamisekile. Kodwa khangela kwakhona, kwaye uya kukukhumbula ukuxabana kobuhlanga, ukuphakama kwe-rigr grrrl kunye nokuxhatshazwa ngokumelene ne-Iraq ye-War (yokuqala, 1990-1991). Saqulunqa ezinye zeendlela eziqinileyo zeeminyaka elishumi ukuxelela umlando ofihliweyo wama-1990.
Ukukhwela Ngomshini - "Ukubulala Ngegama Lika"
I-cowbell ayizange ibonakale ingqongqo njengoko yenzayo xa i- Rage Against Machine ikhathazeka ngokubetha i-airwaves ngo-1992. Ukuhlaselwa kukaBrad Wilk ngokuphindaphindiweyo kwaxelisa ukuqhuma kwezigulane njengoko igumbi likaTol Morello liye lathi litshintshe utshintsho. Kwaye emthunzini weeLos Angeles izibhamu, u-Zack de la Rocha ukhawuleza, "Ezinye zezo zinto ziqhuba imikhosi efana nokutshisa iminqamlezo" yayinomgca onamandla entlabathi. "Ukubulala" yayisetyenziselwa ukuthunjwa amabanjwa aseGuantanamo Bay ngasekupheleni kweminyaka yama-2000, ngokutsho kwe -Guardian nge- SPIN , okubangela ukuba iqela liphumelele (lingaphumelelanga) libophe isebe likaRhulumente.
I-Bikini Ibulala - "Yimbini Yesibili"
Intshukumo yesithathu ye-feminist ntshukumo yama-1990 ifumene i-motto enamandla kule ngoma ka-punk ka-1991. "Sifuna ukuguqulwa, isitayela se-grrrl ngoku!" Kwafika ivukela elivela kwinkokeli yomongameli Kathleen Hanna . Kanye kunye neentsimbi ezipapashiweyo ezenziweyo, ukuhamba kunye nezitatimende ezichasene nefestile, izigubhu eziqhubekileyo zimbumba izihlunu zazo kumculo ohlukile. Izwi elibhekise phambili lomfazi eliphambi komntwana lihlekisayo i-misogyny edwaleni xa abafazi bebhendi uKathi Wilcox , uTobbi Vail kunye noBilly Karren bahlaselwa ngomsindo ngokukratshi. Kaninzi "
UBruce Springsteen - "Iindlela zikaFiladelphia"
Yiyiphi i-ballad ye-Academy Award-winning ballad eyayingummangali. Ifilimu esuka apho, uJonathan Demme, wanikela iMerika imbonakalo yayo yokuqala yokwenene kwe-AIDS ye-AIDS eyayithatha abantu base-gay. "Ayikho ingelosi iyakubingelela," wakhala uCystesteen, ecinga ngengozi ejongene noTom Hanks. Yimvakalelo eyedwa eyabelwe kwiNgoma yeMeanings ngumntu ohlala kuyo: "(mna) ndixakeke ukuba akukho 'ngelosi ingangibingelel ', " kubhala umsebenzisi we-dmerrill. "Iicawa zethu zasixosha. Bayesaba ukusithintela, besaba ukwabelana ngesidlo, besaba ukuba baya kubamba. 'Nguwe kunye nam nomhlobo wam .'
Ulutsha lwe-Sonic - "Ulutsha ngokulwa nobuFascism"
Anders Jensen-Urstad / Creative Commons
Umsindo wezilwanyana zamatye oonobumba be-Sonic Ulutsha olululwe ngaphaya kweemvelaphi zabo zobugcisa kwiminyaka yabo yesibini. U-Kim Gordon okhokelwa yi-"Kool Thing" egxeka ngokunyaniseka kwi-hip-hop yokucinezelwa kwabasetyhini, kwaye le 1992 ithrekhi ye-Thurston Moore-yahlaselwa ngesihloko sokuhlukunyezwa ngokwesondo. Ibhendi yayingenakwesaba ukubeka izikhundla eziphezulu kwiindawo zabo-xa uMoreya wathi, "Ndiyakholwa ukuba iAnita Hill / iJaji iya kuhogela esihogweni," kwakuyinto ephosakeleyo kwiNkundla ePhakamileyo yeNkundla ePhakamileyo uClarence Thomas, owayenyuliwe ngaphandle kwezimangalo zika Hill wahlukumeza ngokwesini.
UTori Amos - "Uthole Lonke Le minyaka"
Ngamanye amaxesha inkuthazo enkulu kunokuvela kwizwi elilileyo. UThixokazi kaPiano u-Tori Amos wakhulula ingoma yeengelosi ngo-1991 eyayiphefumlelwe nguHans Christian Andersen weThe Little Mermaid . Nangona kunjalo, kunye namazwi afana "Ndibe ne-Anti-Christ ekhitsinini ndibuyisela kwakhona," kwakubonakala ukuba kukho ngaphezu kwe-fairytale emva kwesinye. Ekugqibeleni, inamba ephosakeleyo yayisengoma yegosa yeRape, Uhlukumezo & Intsholongwane yeNational Network, apho uAmosi esebenza njengomkhulumeli.
U-Ed Helms usenokuba wuthatha ingoma ngesiqhelo se-karaoke kwi -Ofisi , kodwa ingoma yokulila i-Cranberries ibhekisela ku-1993 kubhubha kwabantwana ababini eNgilandi. Iqela elikhokelwa yi-Dolores O'Riordan lalihlala lijonge ngemfazwe emsebenzini wabo (jonga kwakhona "i-Bosnia" ukusuka ngo-1996 kwi -Faithful Departed ). Lo mzila wango-1994 ngokugqithiseleyo wavuselela abantu, waza wabona abaculi baseIreland benza oko ngoMgqibelo woMgqibelo Baphila ngonyaka olandelayo. Kuloo nqanaba apho umfazi wasekhaya uSinead O'Connor ahlutha umfanekiso wopapa ngo-1992.
Unqulo Olubi - "Ikhulu Lama-21 (I-Digital Boy)"
Ngaba igqirha likaGreg Graffin libiza okanye yintoni? Ekugqibeleni wasikhululwa ngo-1990 ngokuchasene neGrain , ngo-1994 ukuhlaziywa kwi- Stranger Than Fiction kwabakhombisa ukugqithisa okukhulayo kunye nobomi bekhompyutha. "Kwaye andiyifuni, izinto ondinika zona / ikhodi yebha yefayile, i-ID ekhawulezayo, ewe," umculi wenyuka. Nangona, amalungu ebandla ayaqaphela ukuba oku, njengama-60 ekhulwini kwizinto eziphathekayo, kuyingozi. "Inyaniso kukuba nangona ingoma ibhaliwe ngo-1990, kwacaca ukuba ulutsha luya kuthintela ngokulungileyo nokubi ngeteknoloji yedijithali. Mhlawumbi ngenxa yokuba sasithanda imidlalo yevidiyo, "watshela iScientific American ngo-2010.
Ngaba Ufanele Uxineke ngePost-Millennial Output yi-90s Rockers?
Iingoma ezi-10 eziphezulu zePop yase-1990
I-Wintery '90s Iingoma Zokugcina Ufudumele
Abagadli abenzileyo okanye abafakwe inkwenkwezi kwiiMusical
Iingoma ezigqwesileyo kakhulu 'ze-90s
I-Top 10 Bass Riffs ye-90s
Iingoma eziqingqiweyo kwi-90s Pool Party
Iimifanekiso ze-50 ezibalulekileyo zeeSolo ze-'90s Rockers '
Iingoma ezi-10 eziphezulu zePop yase-1999
Iimbali Ngokubethelwa KwaYesu
Yintoni i-Aerial okanye i-Atmospheric Perspective kwi-Art
I-Hercules FAQ kunye ne-Fact Sheet
UMthetho weCaulomb Inkcazo
Indlela yokusebenzisa isenzi seSpeyin 'Echar'
Imifanekiso ye-USS Monitor, iMpi yezoLuntu i-Ironclad
Iindlela ezininzi zokusebenzisa 'I-Entre' eSpanish
Ziyintoni Ubuthakathaka Kwizibalo?
Isiganeko seMarco Polo Bridge
Ukugcinwa kwePhasika kwaSirayeli nakwiiDaaspora
Isiqhamo soMoya weBhayibhile ngoBungqina
Yintoni i-Formule yeKhemikhali yeShukela?
Yeka indlela iChord eDlulileyo idalwe ngayo
Iintlobo ezininzi ezibhekiselele kwisiGaba sesiFulentshi
Ngaba i-Al Jazeera inxamnye namaSemitic kunye ne-anti-American?
Ukutyelela iiMpawu eziBaziwayo kwi-Augusta kaZwelonke
Ukuqonda i-X-Ukumisela umsebenzi we-Quadratic
Iinkqubo zoVavanyo zoTitshala